You are at:Home»Khonumthung»Chin Women Organizations Network ဖွဲ့စည်း
By admin on	 November 27, 2013 Khonumthung
ယခုလ နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့က ချင်းပြည်နယ်မြို့တော်ဟားခါးတွင် ချင်းအမျိုးသမီးအဖွဲ့ ကွန်ယက် (Chin Women Organizations Network ) ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်ဟု သိရသည်။
အမျိုးသမီးကွန်ယက်ကို ပြီးခဲ့တဲ့ ချင်းအမျိုးသားညီလာခံကို တက်ရောက်လာကြသည့် ချင်းပြည်နယ် (၉) မြို့နယ် နှင့် ချင်းပြည်နယ် ပြင်ပ၊ ပြည်ပ ရှိ အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း အသီးသီးမှ ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်း လိုက်ကြသည်။
President : Mai Sui Thluai Thang
Vice-President :Mai Hoi Nei Kim (Ki Kim)
Secretary :Mai Sung Zi Mang
Joint Secretary :Mai Cer Cer
Treasurer :Mai Nun Sang Hnem
Joint Treasurer :Mai Esther Hlei Khia
Auditor :Mai Zion & Mai K Htun Yaid
:Pi Za Tlem
:Rev.Dr. Elly Mang Van Zing
:Daw Kam Khan Dim
:Rev.Dr. Van Thiang
:Mai Thang Shing
:Rev. Mai Ki
:Mai Awi Hawi Luh
ထို့အပြင် အဖွဲ့ဝင်များကို ဒေသအသီးသီးရှိ အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်း မှ ပုဂ္ဂိုလ် ၂၂ ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်ကြပြီး လာမည့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်း ချင်းအမျိုးသမီးအဖွဲ့ချုပ် ကွန်ယက် ညီလာခံကို ကျင်းပရန် တဆက်တည်း သဘောတူ ထားကြ ကြောင်း ထပ်မံသိရသည်။